घरमै बसेर लोकसेवाको तयारी ! | Janakhabar
घरमै बसेर लोकसेवाको तयारी !
काठमाडौं, २८ कात्तिक । शिक्षक तुल्सीराम ढकालले लोकसोवा पढ्ने विद्यार्थीका लागि आईक्यूका नयाँ नयाँ टिप्सहरु सार्बजनिक गरेका छन । उनले इन्टरनेटमा सामान्य ज्ञान र आईक्यू सम्बन्धी पढाएकै भिडीयो राखेर लोकसेवाका विद्यार्थीलाई सहयोग गरीरहेका छन । विभिन्न संस्थामा आबद्ध भएर लोकसेवा कक्षा समेत पढाउँदै आएका ढकालले दिएको आईक्यू टिप्सले घरमै बसेर लोकसेवाको तयारी गर्नेको लागि बरदान साबित भएको छ ।
गुल्मीमा जन्मेर राजधानीका विभिन्न कलेज तथा कन्सल्टेन्सीहरूमा अध्ययन गराइरहेका ढकालले पछिल्लो समय युटुब मार्फत लोकसेवा तयारी गर्ने विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । उनले आफ्नै नामको एउटा युटुब च्यानल बनाएर त्यसमा लोकसेवामा आवश्यक हुने भिडियोहरु अपलोड गर्दै आएका छन् । घरमै बसेर पनि लोकसेवाका पश्न समाधान गर्न सकिने गरी उनी भिडियो निर्माण गरी युटुबमा राख्ने गरेका छन् । हालसम्म उनले लोकसेवाका आअइक्यू प्रश्न समाधानसँग सम्बन्धित १०६ वटा भिडियो राखिसकेका छन् । ढकाल स्कुल कलेज तथा विभिन्न इन्स्टिच्युटहरुमा बैङ्किङ, तथा लोकसेवा आइक्यूहरु पढाउँदै आएका छन् ।
केही समय पहिले तुलसीराम ढकाल आफ्नो कामको सिलसिलामा पाल्पा पुगेका रहेछन् । पाल्पा गएर एउटा चिया पसलमा बसीरहेका उनले दुई महिलाले आपसमा कुराकानी गरेको सुनेछन् । महिलाहरुको लोकसेवा पढ्ने इच्छा तर क्लास लिन समय नहुने पैसा पनि नहुने । उनलाई लाग्यो, घरमै बसीबसी लोकसेवा पढ्न सकिने कुनै प्रविधि ल्याउन सके कत्ति सजिलो हुन्थ्यो होला । उनकी श्रीमतीले उनलाई आइक्यूका केहि प्रश्नहरु सोध्ने गर्थिन् । उनी त्यसको उत्तर तत्काल दिने गर्थे । यसैक्रममा उनलाई श्रीमतीले नै काम गर्न प्रेरीत गरीन् । उनी भन्ने गर्थिन्, ‘तपाईसँग यति धेरै क्षमता छ तर आफ्नो क्षमता हुँदा पनि किन काम गर्नुहुन्न । श्रीमतीबाट धेरै हौसला प्राप्त भएपछि उनले अनलाइनमार्फत् आइक्यूका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने विचार गरे । श्रीमतीको हौसलाको कारण नै उनी यस कार्य गर्न सुरु गरेको बताउँछन् ।
यसका साथै उनका सहकर्मी सुरेश सिवाकोटीबाट पनि धेरै हौसला प्राप्त भएको उनी बताउँछन् । उनीसँग क्षमता भएकाले उनले काम गर्न सक्ने भन्दै उनी पनि ढकाललाई बारम्बार प्रेरित गरीरहन्थे ।
यसैक्रममा उनले काम गर्ने निधो गरे । पहिलो भिडियो उनले ०७३ सालको पुस १५ मा २ मिनेटको भिडियो राखेका थिए । उनी आफ्नो कोठामा भएको बोर्डमा आफै आइक्यूका प्रश्नको समाधान गर्छन् । नजिकै स्ट्याण्डमा मोबाइल राखि भिडियो खिच्छन् । अनी सुरु गर्छन् आफ्नो काम । पछि त्यहि भिडियोलाई आफैले सम्पादन गरेर युटुबमा अपलोड गर्छन् । उनलाई कोहि सहयोगी चाहिँदैन सबै काम आफै पुरा गर्छन् ।
शिक्षक तुल्सीराम ढकालले लोकसोवा पढ्ने विद्यार्थीका लागि तयार पारेको टिप्सहरु हेर्नको लागि यो लिंक खोल्नुहोस -